मिनिस्टर अफ स्वच्छ भारत बन्ने दिपिकाको इच्छा, के होला त पुरा ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodमिनिस्टर अफ स्वच्छ भारत बन्ने दिपिकाको इच्छा, के होला त पुरा !
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दिपिका पादुकोण केहि समय अगाडी अभिनेता रणवीर सिंहसँग विवाह बन्धनमा बाधिएकी थिन । विवाह अघि होस् या पछि रणवीर र दिपिकाको चर्चा सदा हुने गर्दछ ।
बलिउडलाई एक पछि अर्को हिट फिल्म दिने अभिनेत्री हुन् दिपिका । उनको पछिलो फिल्म पद्मावतले पनि बलिउड बक्स अफिसमा धमाका मचाएको थियो । साथै केहि दिन अगाडी उनलाई लोकमत महाराष्ट्रियन अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ ।
बलिउड होस् या नेपाली फिल्म उधोग यहाँ चर्चामा आएपछि अभिनेता अभिनेत्रीहरु राजनीतिमा आउने गरेका छन् । यसैक्रममा एक कार्यक्रमा उनलाई तपाईलाई राजनितिमा आउँने इछा छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।
जसको जवाफ दिदै उनले ‘मलाई राजनीतिको बारेमा केहि थाहा छैन तर पनि म कुनै दिन राजनीतिमा आए भने मिनिस्टर अफ स्वच्छ भारत बन्ने छु । यो सरसफाइ सँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो ।’
उनका अनुसार, उनलाई सरसफाइमा निकै लगाब छ । उनि सानो हुदा साथीको घर जादा पनि त्यहाँ सफाई गर्ने गर्थिन ।